Igbe Ndị Na-emepụta Ihe & Ndị Na - eweta Ya - China Drawer System Factory
Soft emechi ebughibu Double Wall Draide
Okwu Mmalite:Soft emechi ebughibu mgbidi mgbidi draịva-ejikarị maka kichin & ụlọ ịwụ cabinets. Nke a na ụdị adụ mmechi ebughibu mgbidi abụọ drawer slide were undermount drawer slide with gear. Njirimara ahụ bụ ihe ngosi mmịfe na-arụ ọrụ dị jụụ na ngakọrịta ndọtị na-enweghị mkpọtụ. Ọ bụrụ na i nwere mmasị na anyị ebughibu igbe drawer sistemụ, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Nodị No.: M04.86
150mm elu drawer slides ebughibu eji kichin drawer
Okwu Mmalite:150mm elu drawer slider ebughibu eji kichin drawer na-ejikarị eme ihe maka kichin & ụlọ mposi. Nke a na ụdị adụ mmechi ebughibu mgbidi abụọ drawer slide were undermount drawer slide with gear. Njirimara ahụ bụ ihe ngosi mmịfe na-arụ ọrụ dị jụụ na ngakọrịta ndọtị na-enweghị mkpọtụ. Ọ bụrụ na i nwere mmasị na anyị ebughibu igbe drawer sistemụ, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Nodị No.: M04.150
182mm elu adụ nso ebughibu igbe kichin kabinet metal drawers
Okwu Mmalite:182mm elu adụ nso ebughibu igbe kichin kabinet metal úkwù na-ejikarị n'ihi na kichin & ụlọ ịwụ cabinets. Nke a na ụdị adụ mmechi ebughibu mgbidi abụọ drawer slide were undermount drawer slide with gear. Njirimara ahụ bụ ihe ngosi mmịfe na-arụ ọrụ dị jụụ na ngakọrịta ndọtị na-enweghị mkpọtụ. Ọ bụrụ na i nwere mmasị na anyị ebughibu igbe drawer sistemụ, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Nodị No.: M04.182
Okwu Mmalite:118mm metal igbe drawer slides ebughibu drawer usoro na-eji maka kichin & ime ụlọ ịwụ cabinets. Nke a na ụdị adụ mmechi ebughibu mgbidi abụọ drawer slide were undermount drawer slide with gear. Njirimara ahụ bụ ihe ngosi mmịfe na-arụ ọrụ dị jụụ na ngakọrịta ndọtị na-enweghị mkpọtụ. Ọ bụrụ na i nwere mmasị na anyị ebughibu igbe drawer sistemụ, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Nodị No.: M04.118
Silent soft soft ije usoro maka mgbidi abụọ drawer slide
Okwu Mmalite:Silent soft soft ije usoro maka abụọ mgbidi drawer slide-eji maka kichin & ụlọ ịwụ cabinets. Nke a na ụdị nke abụọ mgbidi drawer slide were zoro ezo drawer agba ọsọ na gia. Njirimara ahụ bụ ihe ngosi mmịfe na-arụ ọrụ dị jụụ na ngakọrịta ndọtị na-enweghị mkpọtụ. Ọ bụrụ na i nwere mmasị na anyị ebughibu igbe drawer sistemụ, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Nodị No.: M01.199
Igbe igbe sistemụ maka drọọnụ igwe na-apụ apụ
Okwu Mmalite:Igbe igbe sistemụ maka igwe ihe igwe na-emechi mkpọtụ na-adịkarị mma maka kichin & ụlọ mposi. Nke a na ụdị kichin metal drawer igbe slides eji ala ugwu drawer slide na gia. Njirimara ahụ bụ ihe ngosi mmịfe na-arụ ọrụ dị jụụ na ngakọrịta ndọtị na-enweghị mkpọtụ. Ọ bụrụ na i nwere mmasị na anyị ebughibu igbe drawer sistemụ, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Nodị No.: M01.86
Okwu Mmalite:Ugboro abụọ mgbidi metal eji drawer usoro na-eji maka kichin & ime ụlọ ịwụ cabinets. Nke a na ụdị kichin metal drawer igbe slides eji ala ugwu drawer slide na gia. Njirimara ahụ bụ ihe ngosi mmịfe na-arụ ọrụ dị jụụ na ngakọrịta ndọtị na-enweghị mkpọtụ. Ọ bụrụ na i nwere mmasị na anyị ebughibu igbe drawer sistemụ, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Okwu Mmalite:Ugboro abụọ mgbidi ebughibu igbe drawer usoro usu-eji maka kichin & ụlọ ịwụ cabinets. Nke a na ụdị ebughibu igbe drawer usoro eji nkịtị adụ nso undermount drawer slide na kpochidoro ngwaọrụ. Nwekwara ike ịgbanwe iji push imeghe zoro ezo drawer slide na n'ihu mkpachị. Ihe omuma a bu ihe eji abanye drawer nwere ike iji ya na drawer igwe na drawer osisi. Nwere ike ịchekwa ọnụ ahịa nke ngwa ahịa maka gị. Ọ bụrụ na i nwere mmasị na anyị ebughibu igbe drawer sistemụ, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Nodị No.: M02.89
Silent Soft Closing Igbe Sistem
Okwu Mmalite:Silent soft soft drawer usoro a na-ejikarị maka kichin & ụlọ ịsa ahụ oche. Nke a na ụdị Silent soft mmechi drawer usoro eji nkịtị soft nso undermount drawer slide na kpochidoro ngwaọrụ. Nwekwara ike ịgbanwe iji push imeghe zoro ezo drawer slide na n'ihu mkpachị. Ihe omuma a bu ihe eji abanye drawer nwere ike iji ya na drawer igwe na drawer osisi. Nwere ike ịchekwa ọnụ ahịa nke ngwa ahịa maka gị. Ọ bụrụ na i nwere mmasị na anyị ebughibu igbe drawer sistemụ, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Nodị No.: M02.185
Ebughibu Igbe Igbe Igbe Ihe ngosi
Okwu Mmalite:Ebughibu metal drawer igbe slides na-ejikarị n'ihi na kichin & ụlọ ịwụ cabinets. Nke a na ụdị ebughibu metal drawer igbe draịva eji nkịtị juu nso undermount drawer slide na kpochidoro ngwaọrụ. Nwekwara ike ịgbanwe iji push imeghe zoro ezo drawer slide na n'ihu mkpachị. Ihe omuma a bu ihe eji abanye drawer nwere ike iji ya na drawer igwe na drawer osisi. Nwere ike ịchekwa ọnụ ahịa nke ngwa ahịa maka gị. Ọ bụrụ na i nwere mmasị na anyị ebughibu igbe drawer sistemụ, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Nodị No.: M02.121